Nbudata Tupolev Tu-204 X-Plane 9 - Rikoooo
Iji banye na X-Plane 10dị XNUMX nke a add-on pịa ebe a
Complete ngwugwu (model + 2d panel + VC + na-ada) Tupolev Tu-204-300 ke agba nke Russian ụgbọelu Vladivostok Air. Aircraft nke ezi mma na ezi uche ụgbọ elu nlereanya. -Enye ya a agbalị.
The Tupolev Tu-204 bụ a na-ajụ-osisi obodo ugboelu emepụta site na Russian ụlọ ọrụ Tupolev. E mere ya ihe ịga nke ọma na Tupolev Tu-154 na nwere ike iji tụnyere Western ugbo elu ụdị Airbus A321 na Boeing 757.
The Tu-204-300 bụ a variant nke Tu-204 shortened site 6 m. Na ọ dị adị na abụọ nsụgharị: ogologo osisi version na kwadoro site na Aviadvigatel PS90-A2 engines na awade a Oke kachasị nke 9,300 km, mgbe Mkpa ọkụ version nwere ike ịgafe 3500 km. The igba egbe ahịa bụ Russia si Vladivostok Air.
Onye edemede: Alexander Malygin